xarakada mujaahidiinta al shaab oo sheegay in qaramda mugdiga ay somaaliya kawadaan barkicin | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka xarakada mujaahidiinta al shaab oo sheegay in qaramda mugdiga ay somaaliya...
Sheekh Cali Max’ud Raage (Cali dheere) Afhayeenka Xarakada mjaahidiinta Al Shabaab ayaa waxaa uu mar kale ku celiyay in Hay’adaha kufaarta ee hoostaga Qaramada mugdiga ay ka been sheegayaan xaaladaha abaareed ee ka jira wadanka Soomaaliya oo uu tilmaamay inay wadaan buun buunis.
Cali dheere ayaa waxaa uu sheegay in in Hay’adahaasi ay barakicin kawadaan wadanka oo uu sheegay in dad farabadan oo xoolo dhaqato iyo beeralay ah ay isaga tagayaan deegaanadooda oo uu tilmamay inay aadayaan wadamada Dariska la’ah Soomaaliya sida Kenya iyo Ethiopia oo ay ku sugan yihiin Qoysas farabadan oo ka hayaamay abaaraha Soomaaliya.
Afhayeenka xarkada mujahidiinta Al Shabaab ayaa waxaa uu ugu baaqay dadka Soomaaliyeed ee xoolo dhaqatada ah iyo Beeralayda inay iska joogaan deegaanadooda islamarkaana ay ka faa’idaystaan sida uu hadalka u dhigay roobabka ka da’aya wadanka iyo Wabiyo uu sheegay inay biyo keeneen loona baahanyahay in beerahooda ay fashaan.
Hadalka Al Shabaab ayaa waxa uu imaanayaa xili shacab badan ay kusii qulqulayaan dalka kenya iyidoo dalkaasna uu cabasho ka muujinaya shacabka badan ee somaalida ah.
Previous articleKooxo aan heebtooda lagaraneynin oo awaamiir islaami ah ku soorogay magaalada garowe
Next articleMilkiilayaasha wakaalada warsom oo ka warbixiyay wabmastarka warsom maxmuud carab